OLED Display အသုံးပြုထားတဲ့ Laptop တွေ အနာဂါတ်မှာ ပျောက်ကွယ်သွားတော့မှာလား?
အောင်မြင်စွာ ကျင်းပပြီးစီးသွားပြီ ဖြစ်တဲ့ CES 2018 ပြပွဲမှာ OLED (Organic Light Emitting Diode) TV တွေကို ကုမ္ပဏီအသီးသီးက မော်ဒယ်လ်အမျိုးမျိုး နည်းပညာအမျိုးမျိုးနဲ့ စုံစုံလင်လင် မိတ်ဆက်ပြသခဲ့ကြတယ် ဆိုပေမယ့် OLED Display ပါဝင်တဲ့ စွမ်းဆောင်ရည်မြင့် Laptop တွေကိုတော့ မိတ်ဆက်ပြသခဲ့ခြင်း လုံးဝ မရှိခဲ့ပါဘူး။
Display အမျိုးအစားတွေ အားလုံးထဲမှာ အကောင်းဆုံးလို့ ပြောလို့ရတဲ့ OLED Display ကို Laptop တွေမှာ ၂၀၁၆ ခုနှစ်လောက်ကတည်းက စပြီး အသုံးပြုခဲ့ကြတယ် ဆိုပေမယ့်လည်း Laptop တွေမှာ OLED Display အသုံးပြုထားခြင်းဟာ Laptop ထုတ်လုပ်ရောင်းချသူတွေ အတွက်တော့ ထင်သလောက် အောင်မြင်မှုမပေးနိုင်ခဲ့ပါဘူး။
အဲ့ဒါကြောင့် OLED Panel အသုံးပြုထားတဲ့ Laptop တွေ ထုတ်လုပ်တင်ပို့မှုဟာ ၂၀၁၇ နှစ်ကုန်ပိုင်းအထိ တစ်ဖြည်းဖြည်း ကျဆင်းလာခဲ့တာဖြစ်ပြီး ၂၀၁၈ နှစ်ဆန်းပိုင်းမှာ ကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့တဲ့ CES 2018 ပြပွဲမှာတော့ OLED Panel အသုံးပြုထားတဲ့ Laptop တွေကို မတွေ့ရတော့ပဲ အရည်အသွေးမြင့် IPS Panel တွေပါဝင်တဲ့ Laptop တွေကိုသာ တွေ့ခဲ့ရပါတယ်။
ပြောရရင် OLED Laptop တွေ သေသွားပြီလားလို့ မေးခွန်းထုတ်စရာ ဖြစ်လာပါတယ်။ ဒါကြောင့်လည်း DigitalTrends အနေနဲ့ Laptop ထုတ်လုပ်သူတွေကို အခုကိစ္စနဲ့ ပက်သက်ပြီး မေးမြန်းစုံစမ်းမှုတွေ လုပ်ခဲ့ရပါတယ်။
Lenovo အနေနဲ့ ပြီးခဲ့တဲ့ နှစ်တုန်းက သူတို့ရဲ့ အဆင့်တန်းမြင့် ထုတ်ကုန်တစ်ခုဖြစ်တဲ့ Thinkpad X1 Yoga Gen3Laptop မှာ အရည်သွေးမြင့် OLED Panel အသုံးပြုခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့်လည်း ဒီတစ်ခေါက် ကျင်းပခဲ့တဲ့ CES 2018 ပြပွဲမှာ မိတ်ဆက်သွားခဲ့တဲ့ မျိုးဆက်သစ် Thinkpad X1 Yoga Laptop မှာ OLED Panel အသုံးမပြုတော့ပဲ အဲ့ဒီအစား Dolby Vision HDR (High Dynamic Range) အထောက်အပံ့ပါဝင်ပြီး အလင်းတောက်ပမှုအား ပိုကောင်းတဲ့ LTPS (Low Temperature Poly Silicon) IPS Panel ကိုပဲ အသုံးပြုထားပါတယ်။
အလားတူ HP အနေနဲ့လည်း ၂၀၁၇ နှစ်လည်လောက်တုန်းက Spectre x360 13 Laptop မှာ OLED Panel အသုံးပြုခဲ့တယ် ဆိုပေမယ့် နောက်အသစ်ထုတ်မယ့် Model မှာ အသုံးပြုဖို့ အစီအစဉ်မရှိဘူးလို့ DigitalTrends ကို ပြန်လည်ဖြေကြားခဲ့ပါတယ်။
အခုလို Laptop တွေအတွက် OLED Display အသုံးပြုမှု ကျဆင်းလာတဲ့ အကြောင်းပြချက်တွေထဲမှာ ထုတ်လုပ်သူတွေရဲ့ အဆိုအရ OLED Display တွေဟာ LCD Display တွေနဲ့ ယှဉ်လိုက်ရင် ပါဝါစားများလွန်းတယ်ဆိုတဲ့ အချက်က အဓိကလို ဖြစ်နေပါတယ်။ ဒီအချက်ကိုတော့ Lenovo နဲ့ HP တို့က ပြောကြားခဲ့တာဖြစ်ပြီး OLED Display တွေဟာ ပိုမိုတောက်ပတဲ့ ပုံရိပ်တွေကို ဖော်ပြပေးရတဲ့အခါ ပါဝါပိုစားလွန်းတဲ့ အတွက်ကြောင့် ဖြစ်တယ်လို့ ပြောသွားပါတယ်။
အဲ့ဒါအပြင် HP အနေနဲ့ Ghosting Effect လို့ခေါ်တဲ့ Screen မှာ ပုံရိပ်တစ်ခုတည်းကို ကြာကြာအသုံးပြုနေရင်း ရုတ်တရက် နောက်ပုံရိပ်တစ်ခု ပြောင်းသုံးလိုက်တဲ့အခါ အရင်ပုံရိပ်ရဲ့ ပုံသဏ္ဍာန် ခဏလောက်ကျန်နေခဲ့တဲ့ ပြဿနာမျိုး OLED Panel တွေမှာ တစ်ခါတစ်ရံ ဖြစ်ပေါ်လေ့ရှိပါတယ်။ အဲ့ဒီအချက်ကြောင့် OLED Panel အသုံးပြုထားတဲ့ ဘယ် Display မဆို ပုံရိပ်တစ်ခုတည်း အသုံးပြုဖို့ မသင့်တော်ပဲ မတူညီတဲ့ပုံရိပ်တွေကို မကြာခဏ ပြောင်းလဲအသုံးပြုဖို့ လိုအပ်တာဖြစ်ပါတယ်။
OLED Display တွေမှာ အနောက်ခံ အလင်းလွှတ်လွှာ ပါဝင်ခြင်းမရှိတဲ့အတွက် ပိုမိုပါးလွှာတဲ့ Display တွေထုတ်လုပ်နိုင်တဲ့ အားသာချက်ရှိပါတယ်။ အဲ့ဒါအပြင် OLED Panel မှာ ပါဝင်တဲ့ Sub Pixel Grip မှာ Pixel တွေ တစ်ခုချင်းစီအလိုက် အပိတ်အဖွင့် လုပ်လို့ရနိုင်မှာဖြစ်ပြီး အလင်းလျှော့သုံးနေတဲ့ အချိန်မှာ အဲ့ဒီ Pixel တွေလည်း လိုက်ပိတ်နေမှာ ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့် ပြဿနာမရှိနိုင်ပါဘူး။ ဒါပေမယ့် အလင်းတင်လိုက်တဲ့ အချိန်မှာ ဆိုရင်တော့ Pixel တွေအကုန် အလုပ်လုပ်မှာ ဖြစ်တဲ့အပြင် အထူးသဖြင့် အဖြူရောင် ပုံရိပ်တွေ ဖော်ပြပေးတဲ့ နေရာမှာ OLED Display ဟာ ပါဝါပိုစားနိုင်တဲ့ အားနည်းချက်လည်း ရှိနေပြန်ပါတယ်။
နောက်ပြီး Ghosting Effect နဲ့ ပုံစံတူပြီး Display Burn-in လို့ခေါ်တဲ့ ပုံရိပ် ၂ ခုထပ်တဲ့ ပြဿနာကလည်း OLED Display တွေမှာ ရှိနိုင်ပါသေးတယ်။ Display အမျိုးအစားတွေနဲ့ ပက်သက်လို့ ကောင်းကျိုး၊ ဆိုးကျိုးတွေကို တိတိကျကျ သိချင်တယ် ဆိုရင်လည်း "Laptop ဝယ်ယူတဲ့အခါ ဘာဖြစ်လို့ Display ပိုင်းကို Performance ပိုင်းနဲ့ တန်းတူဦးစားပေးပြီး ဝယ်သင့်တာလဲ?" ဆိုတဲ့ ဆောင်းပါးကို ဖတ်ရှုနိုင်ပါတယ်။
OLED Panel တွေမှာ အားနည်းချက်တွေ ရှိနေတယ် ဆိုပေမယ့်လည်း Dell ကတော့ Alienware 13 R3 Gaming Laptop တွေမှာ OLED Display ကိုပဲ ဆက်လက်အသုံးပြုသွားမယ်လို့ ဖြေကြားသွားပါတယ်။ ဒါပေမယ့်လည်း အရင်ကတော့ Alienware 13 R3 Gaming Laptop တွေမှာ အသုံးပြုနေတဲ့ OLED Panel တွေကို Samsung က ထောက်ပံ့ပေးခဲ့တယ် ဆိုပေမယ့် Samsung ကလည်း ဆက်လက်မထောက်ပံ့နိုင်တော့တဲ့အတွက် Dell အနေနဲ့ နောက်ထပ် OLED Panel ထုတ်လုပ်သူကို ရှာဖွေရဦးမယ့် ပြဿနာရှိနေတယ်လို့ ပြောကြားထားပါတယ်။
နောက် Samsung အနေနဲ့လည်း OLED Display ကို Laptop PC တွေမှာ အသုံးပြုရင် ထုတ်လုပ်မှု ကုန်ကျစရိတ် ပိုများသွားပြီး အကျိုးမြတ်လည်း သိပ်မရနိုင်တဲ့အတွက် OLED Display ကို သူ့ရဲ့ Smartphone တွေ အတွက်ပဲ ထုတ်လုပ်ပေးတော့မှာ ဖြစ်ပါတယ်။
Laptop ထုတ်လုပ်သူတွေအနေနဲ့ OLED Panel ဟာ Display Panel တွေအားလုံးထဲမှာ စျေးအကြီးဆုံးဆိုတဲ့ အချက်ကိုတော့ ပြောမသွားပေမယ့် OLED Panel ရဲ့ Color ထွက် ကောင်းမွန်တိကျမှု၊ Contrast Ratio ကောင်းမွန်မှုနဲ့ အနက်ရောင်ကို အကောင်းမွန်ဆုံး ဖော်ပြပေးနိုင်တယ်ဆိုတဲ့ အားသာချက်တွေကြောင့် Laptop တွေမှာ အသုံးပြုခဲ့ကြတာ ဖြစ်ပါတယ်။
နောက် CES 2018 ပြပွဲမှာ မိတ်ဆက်ပေးခဲ့တဲ့ Display Panel တွေမှာဆိုရင်လည်း OLED Panel လိုပဲ Color ထွက်အားကောင်းပြီး Contrast Ratio လည်းကောင်းမွန်တဲ့ HDR နည်းပညာပါ Display Panel တွေ ပြသသွားခဲ့ပါတယ်။ အထူးသဖြင့် LG ကမိတ်ဆက်ပေးခဲ့တဲ့ Display မှာ Nano-IPS နည်းပညာကို အသုံးပြုထားပြီး ၃၄ လက်မ အရွယ်အစားရှိ မျက်နှာပြင်မှာ Nano Cell Particles တွေ ပါဝင်မှာ ဖြစ်တဲ့အတွက် ပိုမိုတောက်ပပြီး Color ထွက်အားကောင်းတဲ့ ပုံရိပ်တွေ ထုတ်ပေးနိုင်တယ်လို့ LG ကပြောထားပါတယ်။
Nvidia အနေနဲ့လည်း BFGD (Big Format Gaming Display) ကို မိတ်ဆက်ပေးခဲ့ပြီး Gamer များအနေနဲ့ မိမိရဲ့ Nvidia Video Card မှတစ်ဆင့် အဲ့ဒီ Display ပေါ်မှာ 4K အရည်အသွေးနဲ့ ဂိမ်းတွေကို ကောင်းမွန်တဲ့ Refresh Rate နဲ့ အစဉ်ပြေချောမွေ့စွာ ဆော့ကစားနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ အဲ့ဒါအပြင် BFGD မှာ Nvidia Shield Built-in ပါဝင်ဦးမှာ ဖြစ်တဲ့အတွက် Shield Console မှာ ပါဝင်တဲ့ Apps နဲ့ Games တွေကို အသုံးပြု ဆော့ကစားနိုင်ဦးမှာလည်း ဖြစ်ပါတယ်။
ဒါပေမယ့်လည်း ဘယ်လို Display နည်းပညာ၊ ဘယ်လို Display အမျိုးအစားသစ်ကိုပဲ မိတ်ဆက်ပါစေဦး၊ CES 2018 ပွဲဟာ OLED Display ပရိတ်သတ်တွေ အတွက်တော့ စိတ်ကျေနပ်မှု မပေးနိုင်ခဲ့ပါဘူး။ ဒီတော့ ထုတ်လုပ်သူတွေ အနေနဲ့ Laptop တွေမှာတင် မဟုတ်ပဲ Monitor တွေမှာလည်း OLED Display ကို အသုံးပြုသွားဖို့ အစီအစဉ် မရှိကြတော့ဘူးလို့ ပြောလို့ရမှာပါ။
Laptop ထုတ်လုပ်သူတွေဘက်က အားနည်းချက်တွေရှိနေတဲ့ OLED Display ကို Laptop တွေမှာ ဆက်လက် အသုံးပြုသွားမယ့် အစီအစဉ်တွေ မရှိကြပေမယ့် OLED Display နည်းပညာဟာ ပျောက်ကွယ်သွားမှာ မဟုတ်ပဲ နောင်တစ်ချိန်ကျရင် အခုထက် ပိုမိုကောင်းမွန်တဲ့ OLED Display တွေကို Laptop တွေမှာ ထပ်မံ မြင်တွေ့လာနိုင်ပါ့မလား ဆိုတဲ့အချက်ကိုတော့ စောင့်ကြည့်ကြရဦးမှာ ဖြစ်တယ်လို့ ကျွမ်းကျင်သူတွေက သုံးသပ်ခဲ့ကြပါတယ်။
This Article is contributed by 2puu.
THX အသိအမှတ်ပြုလက်မှတ်ရ ပထမဆုံး Laptop ဖြစ်လာတဲ့ Razer Blade Pro (2017)
OLED Display တွေ ထုတ်လုပ်ဖို့အတွက် ဒေါ်လာ ၉ ဘီလီယံခန့် ရင်းနှီးမြှပ်နှံသွားမယ့် Samsung
Gaming Laptop Laptop OLED Display Display OLED Display LCD Display Display Technology Big Format Gaming Display